Mazava ny fampianarana fa sady nitaiza ny vahoaka ho tia mampiasa izay hananan’izy ireo ho fivelomany ny mpanjaka no nahay nampianatra fa miteraka soa iombonana ny fifamelomana. Tato ho ato anefa dia ny fampizarana ny vahoaka hamantam-bonona sy handray fanampiana lava izao no ataon’ny fitondram-panjakana ary ny faramparany teo aza dia saika amin’ny anaran’ny filoham-pirenena mivady foana ireo fanampiana nomena. Anisan’izany ny tany Port Bergers. Vary sy menaka sy siramamy sy izay rehetra mety ilaina amin’ny fiainana andavanandro kanefa tsy maharitra ela sy ambolena no nozaraina tetsy Mahamasina ny alatsinainy teo. Tsy propagandy mialoha ny fotoana ve ny toy izany ? Sao mbola mitohy ihany ny fanabadoana natomboky ny mpanjanatany ?